Madaxweynaha Jubbaland oo ka qeyb galay aaska Guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland (SAWIRRO) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweynaha Jubbaland oo ka qeyb galay aaska Guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland (SAWIRRO)
Madaxweynaha Jubbaland oo ka qeyb galay aaska Guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland (SAWIRRO)
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ka qayb galay aaska Allaha u naxariistee, guddoomiyihii rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland marxuum Shaafi Raabi Kaahin oo maanta lagu aasay magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa qoyskii,shacabka Jubbaland,iyo shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay geerida marxuumka wuxuuna Alle uga baryay inuu naxariistii Janno ka waraabiyo.
Madaxweynaha oo Warbaahinta kula hadlay goobta Aaska ayaa sheegay in dhagarta Argagixisada ay tahay mid mudan in laga wada qayb qaato sidii looga hortegi lahaa, isagoo sheegay in qof masaajid illahay kasoo baxay in la dilo ay tahay mid uu Ciqaabtiisa dhadhamin doono qofkii falkaas gaystey.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa intaas ku daray in Shacabka iyo masuuliyiinta ay u Siman yihiin maleeshiyada Al-Shabaab isagoo tusaale usoo qaatay goob ay dadweyne ku shaahayeen magaalada Muqdisho oo maalmo kahor uu isku qarxiyay naftii halige ka tirsan argagaxisada.
Madaxweynaha ayaa Shacabka reer Jubbaland iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka Argagixisada si loo xaqiiiyo himilada Shacabka Soomaaliyeed ee ah inay Nabad iyo xasilooni ku noolaadan.
Aaska ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweyne ku xigeennada Jubbaland,Guddoonka golaha Wakiillada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweynaha Jubbaland oo ka qeyb galay aaska Guddoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland (SAWIRRO) was last modified: September 12th, 2020 by Admin
4 dhimasho iyo 5 dhaawac FAAH FAAHIN QARAX KA DHACAY MAGAALADA BAYDHABO
Qaar kamid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo gaaray Garowe
Maxaa maanta looga hadli doonaa kulanka golaha shacabka
Dhageyso:-Soomaalida Mareykanka Oo Deeq Soo Gaarsiiyey Ehelada Dadkii Ku Geeriyooday Qarixii Zoobe